Tsy maintsy fantatry ny mpamorona ireo fitaovana amin'ny rindrina 9, mendrika ny angonina!
Home / Interior design / Tsy maintsy fantatry ny mpamorona ireo fitaovana amin'ny rindrina 9, mendrika ny angonina!
2021 / 08 / 02 FisokajianaInterior design 5732 0
Amin'ny famolavolana anatiny, ny endrika sy ny fitaovana amin'ny rindrina dia hisarika ny saina betsaka, ny lokon'ny latsa-taratasy, ny sary hosodoko dia nalaina ho azy. Ny tontolon'ny raharaha sarotra dia tsy misy ilàna azy ihany koa. Androany aho dia manana lisitr'ireo fitaovana rindrina 9, manomboka amin'ny karazana loko, karazana tontonana rindrina ka hatramin'ny karazana vato. Ireo dia mifanaraka kokoa amin'ny famolavolana endrika minimalista, wabi-sabi, hazavana maivana ary endrika malaza hafa. Miaraha mijery!
▼▼ Sarintany mpitari-dalana
Misy karazany maro ny loko mandoko. Ny sary hosodoko latsa maroloko, ny sary hosodoko misy endrika isan-karazany, ny loko miloko azo aseho dia tsy tambo isaina. Androany dia misafidy karazany telo izahay hampahafantatra anao, micro-simenitra, loko malay ary loko simenitra.
Microcement dia karazana haingon-trano vaovao. Ireo singa fototra ao aminy: simenitra, resina miorina amin'ny rano, additives, pigment mineraly, sns. Azo takarina ho karazana simenitra manana haingon-trano matanjaka kokoa io. Maroloko, azo nozazaina ary mety manify na matevina, ary afaka mamorona firafitra maro karazana koa. Izy io dia mitovy amin'ny tany diatomaceous, saingy mahery noho izy io. Azo ampiharina amin'ny rindrina, tafo ary gorodona. Noho izany, efa eken'ny besinimaro io raha vao nampidirina.
▲ Tsindrio ny sary raha te hahalala bebe kokoa momba ny simenitra micro
Mampiavaka ny microcement
Izy io dia manana fahombiazana tsara amin'ny tantera-drano sy ny afo.
Izy io dia maharitra tsara sy mahatohitra fanoherana. Manana firaiketam-po lehibe.
Tsy solafaka izy io ary misy tampony mirindra. Azo ampiasaina amin'ny faritra midadasika izy io. Tena mety dia ny fanamboarana.
Manana firafitra tsara izy io, ary izany dia afaka manatsara ny tsiro sy ny hakanton'ilay habaka.
Fampandehanana sy fanasana lamba → fanodinana primer → fametahana harato → fanosehana simenitra micro → fanesorana ny simenitra faharoa → famitana sanding → fandrakofana loko miaro
(II) loko malay
Ny anaran'ny vokatra dia stucco, izay midika hoe rihitra, ary nantsoina hoe "loko malay" izy satria ny endriny dia mitovy amin'ny hoofprint an'ny soavaly.
▲ Tsindrio ny sary raha te hahalala bebe kokoa momba ny loko Malay
Izy io dia karazana loko slurry mifangaro emulsion akrilika sy fitaovana hafa. Izy io dia karazana loko izay voakiky amin'ny rindrina amin'ny alàlan'ny fitaovana fanosehana isan-karazany hamokarana firavaka isan-karazany.
Ny loko malay dia misy vokany manjelanjelatra. Izy io dia manana famaranana manjelanjelatra sy lamina be pitsiny. Raha miafina dia misy heviny telo-refy. Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana matetika ny loko malay dia: loko malaychrome, loko malay mifangaro, loko volamena sy volafotsy, loko malay, loko malay phantom.
▲ loko malaychrome
▲ loko malay mifangaro
▲ kofehy volamena sy volafotsy
Paint loko malay Phantom
Mampiavaka ny loko malay
Fananganana tsotra, mila manosotra sy manosotra ihany.
Fomba haingo manavao. Izy io dia manana endrika mazava sy vokany tsara tarehy.
Izy io dia misy fanoherana fanoherana, fanoherana ny rano ary fanoherana ny harafoana. Ireo toetra ireo dia mety hahatonga ny rindrina haharitra ho vaovao.
Izy io dia manana singa fanoherana avo lenta. Matanjaka kokoa izy io, tsy mora manangona vovoka ary mora diovina.
House Trano iray Fanglei
Ny dingana fanorenan'ny loko malay
Voalohany, aorian'ny nahavitan'ny fitsaboana fototra, mihodina amin'ny primer anti-alkali sy ny fasika mandra-pahadio sy malama. Ireo fitaovam-pitsaboana voalohany eny ifotony dia tokony hanana sanda PH latsaky ny 10.
Faharoa, fampifangaroana loko. Ny loko malay tenany dia fotsy, azo ahitsy amin'ny fananganana loko. Mampiasà paty miloko mifantoka be amin'ny rano hampifangaro ny loko.
Fahatelo, fikikisana. Ampiasao ny fitoeran-trowel sy ny fitaovana hafa ho an'ny point batch, ary aforeto tsara. Isaky ny mila miandry ny maina ianao alohan'ny hanesorana azy. Fehezo ny elanelana misy eo amin'ny lamina, arakaraka ny mahamaina no tsara kokoa. Ny fikolokoloana marobe dia mila manisy fiheverana ny vokatra mifanindry, mandra-panaronana ny sosona ambany.
Fahefatra, taorian'ny fahavitan'ny fanoratana fanosotra. Mampiasà antsy vy tsy manara-penitra mba hametahana ny zana-kazo manapotipotika, na mampiasa volon'osy fanamainana sandaly 2000 harato mandra-pahatongan'ny famirapiratan'ilay volon-koditra marbra. Amin'izay fotoana izay dia vita ny dingana fanamboarana.
(C) loko simenitra
Loko simenitra, karazana firakotra rindrina ambanivohitra. Antsoina koa hoe simen kanto izy io. Fa ny anarany hafa dia tsy tokony ho olon-tsy fantatra aminao - beton mazava.
▲ Kitiho ny sary raha te hahalala bebe kokoa momba ny loko simenitra
Manana fampiharana isan-karazany izy io.
Ny loko simenitra dia manana endrika simenitra tokana. Tena haingon-trano sy mampiavaka ny endriny izy io.
Ny loko simenitra dia manana firafitra tsotra, noho izany dia maitso, miorina amin'ny rano ary tsy misy loto.
Ny primer dia manana ny asany amin'ny fisorohana ny rindrina tsy ho vaky, mandatsaka chalking ary mandatsaka lavenona.
Ny palitao ambony dia mety hahatratra ny fanoherana ny fikosoham-bolo, ny hamandoana ary ny fanamorana aorian'ny famafazana.
Dingana fanorenan'ny loko simenitra
Tsotra ihany ny fanamboarana loko simenitra. Ny fitsaboana fototra amin'ny sosona putty dia manomboka miditra amin'ny dingana fananganana loko simenitra. Voalohany, ahodin-tsika ny primer mpanisy tombo-kase alkali, faharoa, esorintsika ny lokon'ny simenitra, ary farany, ahodinkodintsika / esorintsika ny palitao ambony. Vita ny asa! Misy karazany roa ny fizotry ny fanamboarana loko amin'ny simenitra, izay mila hazavaina: ny iray dia fikororohana fisaka. Ny faharoa dia ny fanesorana ny batch. Izay zaraina ho karazan-tsoroka roa ihany koa: ny iray fanesorana trowel, famafana antsy iray. Ny fizotran'ny fananganana tsirairay dia miteraka vokatra hafa, noho izany mila misafidy tsara ianao.
Famintinana ny kilasy
Haavo estetika: arakaraky ny safidinao
Sariaka amin'ny tontolo iainana: loko simenitra> loko malay> simenitra bitika
Laharana vidiny: simenitra mikraoba> loko malay> loko simenitra
Fahasarotana amin'ny fananganana: loko malay> loko simenitra> simenitra bitika
Mateza: loko malay> simenitra micro> loko simenitra
02 Takelaka rindrina
(I) Rock Panel
▲ Tsindrio ny sary raha mila fanazavana momba ny tontonana rock
Vatam-bato vita amin'ny keramika dia vita amin'ny akora voajanahary amin'ny alàlan'ny fizotrana manokana. Ny fitaovana porselana vaovao manana habe be dia be dia mila potserina miaraka amin'ny fanampian'ny milina maherin'ny 10,000 taonina, ampiarahana amin'ny haitao famokarana mandroso, ary alefa amin'ny hafanana ambony mihoatra ny 1200 ℃ hahafahanao mahatanty ny fanodinana fanapahana, fandavahana ary fitotoana. Ny tontonana vita amin'ny vato seramika dia ampiasaina indrindra eo amin'ny sehatry ny takelaka an-trano sy ao an-dakozia.
Ny tontonana vatolampy dia manan-karena endrika miloko: loko madio, vatolampy volkano, voamaina vato, voamaina lamba, voamaina hazo, vato tany am-boalohany, vato soa ary firakotra hafa.
▲ andiam-bato volkano
▲ Andiana varimbazaha lamba
▲ Andiam-bary vita amin'ny hazo
▲Andiam-bato tany am-boalohany
▲ Andiana vato soa
Mampiavaka ny Rock Panel
Manana hamafin'ny mihoatra ny kilasy faha-5 izy ary mahatohitra mafy ny akanjo.
Manana fananana fanoherana ny hatsiaka izy io. Izy io dia mahazaka -80 ℃ maripana ambany ary mahazaka ny hatsiaka tsy misy simba.
Ny ambaratonga tsy misy afo mirehitra dia kilasy A1.
Matevina izy io ary manana sosona fiarovana nano-mahaleo tena. Izy io dia manana ambaratonga 5 amin'ny fitsaboana tsy misy pentina. Tsy mety simba ny tasy.
Ny hatevin'ny vato fisaka dia 3mm ka hatramin'ny 20mm. Na ny takelaka vato manify indrindra aza dia mafy hatoka. Izy io dia afaka manohitra ny hamafiny sy ny fiatraikany.
Ny takelaka vatolampy dia azo atsofoka, nohosorana, notapahina ary fanodinana lalina hafa. Tena azo ovaina izy io.
Drafitra fanokafana vato fisaka
Fitsaboana substrate → sary sy fizarazarana → fanomanana adhesive → fananganana adhesive → firakotra miverina amin'ny takelaka vato lehibe → fisaka vato lehibe → fihovotrovotra sy fampidinana → fitaovana fanamafisam-peo hanampiana amin'ny fanitsiana ny haavo → ny fanadiovana sy ny fiarovana ny faritra → ny fitsaboana amin'ny laoniny.
Ny latabatra maina mihantona dia mizara ho karazany 2 koa: volom-boaloboka volom-boaloboka vita amin'ny volom-boasary maina mihantona sy fomba fametahana + vy zorony tsy miorina.
(II) tabilao KD
Ny anarana feno ny tontonana KD dia panina veneer vita amin'ny hazo hosodoko. Izy io dia tontonana novokarina tamin'ny alàlan'ny fampiasana veneer hazo teknolojia (veneer hazo voaverina). Izy io dia mampiasa hazo manta toy ny akora, ary aorian'ny andian-dahatsoratra, fandokoana, fanarenana, fitsaboana fanesorana bibikely, mari-pana avo lenta ary fanerena avo lenta, teraka tamin'ny haavo teknolojia izy io. Ny velaran'ny vokatra vita dia manana fahatsapana tena zava-misy sy fijerin'ny hazo tena izy, ary tena classy.
▲ Tsindrio ny sary raha te hahalala bebe kokoa momba ny Coding Board
Ny toetran'ny Coding Board
Ny toerana famokarana dia tsy mila manafotra loko. Ny famoahana formaldehyde dia ambany lavitra noho ny fenitra takiana amin'ny firenena, ny fiarovana ny tontolo iainana ary tsy misy loto.
Ny karazana tsipelina isan-karazany, ny fitsaboana amin'ny tany ary ny habeny namboarina dia azo omena araka ny fepetra takiana amin'ny famolavolana. Izy io dia manana rindrambaiko midadasika be dia be.
Coding board dia mampiasa loko miorina amin'ny rano. Manana firaiketam-po tsara izy io ary tsy voakasiky ny hamandoana. Ny androm-piainany dia mihoatra ny avo roa heny noho ny an'ny fomba nentim-paharazana.
Ny dingan'ny fananganana rindrina Coding board
Hetezo ny tabilao Coding arakaraka ny habeny —- Ny kaody fanaovana doka ao ambadiky ny latabatra —- ny toerana fametahana marika fametahana —- ny fanapahana lamba tsy misy tenona araka ny habeny —- apetaho ny lamba tsy voatenona —- apetaho ny takelaka fanaovana kodiarana —- vitao ny rindrina
(C) Birao lehibe amin'ny rindrina
Great Wall panel dia karazana tabilao maodely vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo, izay an'ny hazo ekolojika. Izy io dia fitaovana vaovao maitso namboarina tamin'ny vovo-kazo sy ny PVC ary miampy ireo additives hafa nohatsaraina. Nantsoina hoe Great Wall Board izy io satria ny ampitan'ny hazo fijaliana dia mitovy amin'ny Great Wall.
▲ Tsindrio ny sary raha te hahalala ny antsipirian'ny Great Wall Board
Mampiavaka ny birao manda lehibe
Tsy misy akora manimba toy ny formaldehyde, amoniaka ary benzene. Mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly momba ny tontolo iainana sy ny fenitra Eoropeana. Maitso sy tsy misy formaldehyde izy io.
Fahombiazana ara-materialy, fanoherana rano tsara, fanoherana tsara ny harafesina, famonoana ary hamandoana.
Izy io dia manana tanjaka avo, fanoherana ny fiatraikany mafy, tsy mora fanovana sy fihoaram-pefy, fanoherana ny fahanterana mahery, ny fe-potoana fampiasana dia mety hahatratra 30 taona mahery.
Izy io dia azo hokapaina, hohofaina, aharatra, hohomboina, hosodoko ary hofatotra, fametrahana tsotra ary fananganana mora.
Tena mahazaka menaka sy loto izy io satria tsy mahazaka rano ilay fitaovana. Tsotra ny fanadiovana sy fikojakojana azy, ary azo fafana amin'ny tasy.
Ny toerana mahazatra indrindra amin'ny tontolon'ny Great Wall dia ny rindrina. Ny fizotry ny fametrahana rindrina dia somary tsotra. Ny fizotran'ny fananganana dia: zahao ny tampon'ny rindrina → farano ny rindrina → apetaho ny keel → apetraho ny tontonana lava.
Famintinana ny kilasin'ny rindrina
Diplaoma Estetika: nanapa-kevitra arakaraka ny safidinao
Sariaka amin'ny tontolo iainana: Vaton-kazo> Sola fanaovana kaody> Takelaka rindrina lehibe
Vidiny: Rock board> Coding board> tontonana Wall Great
Fahasarotana amin'ny fanamboarana: tontonana rindrina lehibe> tontonana Rock> tontonana Coding
Faharetana: Vato vato> Takela-bato lehibe> Takela-by
03 Sokajy vato
(A) vato voa-kazo
Ao amin'ny indostrian'ny vato, raha mbola ilay vato misy endritsoratra toy ny hazo aorian'ny fanapahana sy fanodinana azy dia azo antsoina hoe vato voa-kazo. Noho ny fomba fanodinana sy ny fanapahana samy hafa, ny fanapahana lavareny dia voamadinika hazo, ary ny fanapahana miendrika horonam-bokatra dia mety hanehoana voamaina misy rahona matevina na firafitra mitovy amin'ny tsingerin-taona.
▲ Kitiho ny sary hahalalanao ny antsipirian'ny vato voan-kazo
Nozaraina ho vato voamadinika hazo volontsôkôlà, vato voan-kazo kafe, vato voan-kazo fotsy, sns araka ny loko isan-karazany.
▲ Vary hazo mena
▲ Vary hazo kafe
▲ Vato vato fotsy
Mampiavaka ny vato voa-kazo
Ny tena mampiorina azy dia ny calcium carbonate. Ny vatosokay dia marefo ary ambany ny hakitroky, ny miondrika ary ny tanjaka famatrarana.
Ny firafitry ny gazy karbonika sy ny firafitry ny vovo-dronono dia mahatonga ny tahan'ny fifangaroan'ny vatosokay ho avo indrindra amin'ny ankapobeny.
Ho an'ny fametrahana rindrina, afaka misafidy ny manamboatra paoma na mihantona ianao. Ho an'ny faritra kely iray ary ny haavony dia tsy mihoatra ny 3m, azonao atao ny misafidy ny fomba fametahana manify sy ny fomba fanaovana paving hafa. Raha lehibe kokoa ny faritra ary avo kokoa ny haavony dia asaina mifidy vato mihantona mihantona ianao.
(B) vato sokay
Ny vato sokay dia an'ny vatosokay voajanahary. Efa an-jatony tapitrisa taona maro lasa izay teo ambanin'ny potipotan'ny vatolampy, akorandriaka, haran-dranomasina sy ny fiantraikan'ny fiainana an-dranomasina hafa, fusion, ary taorian'ny fifandonana lava be, ny fitrandrahana ary niforona ihany koa. Tonga amin'ny loko volondavenona, fotsy fotsy, fotsy mainty, mavo, mena ary mavo. Fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe "Vato Fiainana", anarana ambony.
▲ Tsindrio ny sary raha te hahalala bebe kokoa momba ny vato sokay
Ny vato Lyme dia azo sokajiana araka ny tokony ho izy loko.
Vato sokay fotsy, vato sokay fotsy, vato sokay volontany, vato sokay beige, vato sokay mavo
Araka ny endrika ivelany vato sokay azo zaraina ho.
Matt sokay vato, lychee ambonin'ny sokay vato, borosy ambonin'ny sokay vato
Ny mampiavaka ny vato sokay
Ny vato sokay dia vato voajanahary. Izy io dia fitaovana fananganana tsy misy taratra, maitso ary sariaka amin'ny tontolo iainana.
Ny vato sokay dia afaka mifehy tsara ny hamandoana anaty trano. Manana fahombiazan'ny fitehirizana hafanana ambony izy, ary afaka mivoaka ny hafanana. Izy io dia manana ny fiasan'ny fifohana ny hamandoana sy ny fitrohana ny hafanana.
Na dia avo dia avo aza ny hamafin'ny vato sokay dia tsy mahazaka izany. Mora vaky ny fifandonana.
Kely ny faritry ny vato sokay. Matetika voafetra ny habeny mandritra ny fampiharana.
Ny firafitry ny vato sokay dia calcium carbonate. Izy io dia manana pores kely madinidinika eo amboniny, izay afaka mandray mora foana ny tasy sy manafina loto.
▲ Eo anelanelan'ny anatiny sy ivelany | Volavola ao anaty DIY
(C) pu vato
Ny famaritana sinoa ny "pu" dia polyurethane, ny anarana feno polyurethane. Izy io dia anarana iraisan'ny fitambarana macromolecular misy vondrona karbamate miverimberina eo amin'ny rojo lehibe. Izy io dia vita amin'ny diisocyanate biolojika, na polyisocyanate sy dihydroxy, na polyhydroxyl compound polymerization of polyurethane material. Tena be mpampiasa izy io ary afaka manolo ny fingotra, plastika, nylon ary vokatra hafa.
▲ Tsindrio ny sary hahalalanao ny antsipirian'ny vato PU
Mampiavaka ny vato PU
Noho ny fananana akora akora, ny fampifangaroana ny pu pu dia tsy manampy fitaovana artifisialy be loatra, noho izany dia tena sariaka amin'ny tontolo iainana.
Satria vita amin'ny fitaovana teknolojia avo lenta izy io, maivana amin'ny kalitao ary azon'ny olona tokana hapetraka.
Ny vokatra dia misy akora polymer ary nofafazana fonosana fonosana matanjaka be. Izy io dia manana ny fahombiazan'ny fanoherana asidra, fiarovana amin'ny masoandro, fanoherana UV ary faharetana.
Pu vato dia rafitry ny karatra anatiny. Izy io dia manana sisin'ny lela, alika feno ary seam voatahiry, ary azo apetraka mivantana amin'ny visy sy fantsika basy mba hamita ny fametrahana.
Fametrahana vato pu
Ny fizotry ny fananganana pu vato dia tsotra be. Mila miasa amin'ny rindrina fisaka ihany ianao, ary noho ny lanjany maivana dia azo tapahina eo amin'ny tranokala izy io raha ny endriny. Azo tapahina araka ny sitra-pony araka ny vokatry ny famolavolana, izay mitsitsy ny vidin'ny asa sy ny fotoana.
Famintinana ny karazana vato
Diplaoma famelabelarana: arakaraky ny safidinao
Fiarovana ny tontolo iainana: vato sokay> vato voan-kazo> vato PU
Laharam-bidy: Vato sokay> Vato voa> Vato PU
Fahasarotana amin'ny fanamboarana: vato Pu> vato voan-kazo> vato sokay
Faharetana: vato PU> vato voa-kazo> vato sokay
Previous :: Ny herin'ny asa-tanana hamoronana toerana feno fitomboana ara-dalàna. Feimo Design Next: Inona no atao hoe rindrina lehibe?